मध्यपुरथिमिस्थित स्यानिटरी गोदाममा आगलागी, छ करोडको क्षति
सोमबार, १२ बैशाख, २०७९- ११:३७:००/ Monday 04-25-22
काठमाडौँ, १२ वैशाख। मध्यपुरथिमि नगरपालिका–५ कमेरोटारमा गए राति भीषण आगोलागी भएको छ । स्थानीय राजन प्रजापतिको ग्रिनवेयर स्यानिटरी गोदाममा भएको आगलागीमा मानवीय क्षति नभए पनि करोडौँको सामान जलेर नष्ट भएको छ ।
मध्यराति जुद्ध बारुणयन्त्र भक्तपुर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले आज बिहान मात्रै आगो नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिनन्दन चौधरीले दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगले आगो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो ।
गोदामभित्र रहेको अधिकांश केमिकल, मेसिनरी सामानलगायतका सामान जलेर नष्ट भएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रारम्भिक अनुसन्धनमा करिब रु छ करोड बराबरको क्षति भएको बताउनुभयो । क्षति भएका सामानको विवरण र क्षतिको यथार्थ विवरण भने दिउँसो मात्रै आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भवनमा आगलागी हुँदा २० जनाको ज्यान गयो
जानीजानी विमान दुर्घटना, १३२ जनाको मृत्यु !
स्थानीय निर्वाचन: १९६ पालिकामा कांग्रेस विजयी
मतगणना जारी : देशभर कसले कति सिट जिते ?
सिके राउतको पार्टी पहिलो पटक नगर प्रमुखमा बिजयी
भरतपुरमा रेनु दाहाल १७ सय १२ मतले अगाडि
स्थगित १५ केन्द्रमा मतदान जारी
अमेरिकाका एक करोड ३२ लाख बालबालिका कोरोनाबाट संक्रमित